Global Voices teny Malagasy » Iza no hakan’ireo manampahaizana ao Tiorkmenistàna tàhaka ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Desambra 2019 16:24 GMT 1	 · Mpanoratra Abel Polese Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Tiorkmenistana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Ny Tetezana - The Bridge
Lehilahy ao Tiorkmenistàna manao fitafiana nentim-paharazana. Sary(c): Abel Polese,2014-15, nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Ashgabat, amin'ny 4 ora 30 mn maraina. Andiana vahiny maromaro no mitangorona manoloana ny fidirana ny seranam-piaramanidina iraisampirenen'ny renivohitra, te-hatory kanefa tsindrian-daona. Notsenaina tanora lahy teo amin'ny 30 taona eo ho eo, izay mivezivevy manodidina ireo andian'olona vao tonga ireo sy ny arabe, manao izay hidiran'ny tsirairay anatin'ny fiara natao hitondra azy any amin'ny hotely nomanina ho azy ireo.
Zavatra matetika hita eny amin'ny seranam-piaramanidina izany, kanefa raha jerena akaiky ilay tranga, ny mpitazana efa zatra izany dia hahatsikaritra fahasamihafana iray lehibe : amin'ny fitenin-dry zareo ilay tanora lahy no niresaka am-panajana tamin'ireo vahiny avy amin'ny firenena miteny Arabo, manome torolalana hafa amin'ny fiteny Rosiana, miarahaba tongasoa ireo manampahaizana avy ao Torkia amin'ny fiteny Tiorka, manampy ireo vahiny Eoropena sy Amerikana amin'ny fiteny Anglisy, ary manome torolalana ny mpitondra fiara karetsaka amin'ny fiteny Tiorkmeniana. Avy eo nisy namany tonga nanatona azy ka nanomboka niresaka tamin'ireo vahiny miteny ny fiteny Farsiana tamin'ny fitenin-drazan'izy ireo, ankaotra ireo fiteny hafa ananany anaty voambolany manokana.
Tsy mora ny mikarakara vahiny, indrindra rehefa ampolony maro izy ireo. Kanefa, hain’ ireo namantsika Tiorkmeniana ireo amin'ny antsakany sy andavany ny mifandray amin'ny fomba fiteniny, ary rehefa mihaona aminà olona vaovao ry zareo, tadidin-dry zareo avy hatrany ny fiteny ilain'ilay olona.
Harivan'iny andro iny, mbola nahagaga ilay vahiny liana ihany koa ny fahitàna fa hay tsy tranga maningana ihany iny teny amin'ny seranam-piaramanidina iny : Ny fahaizana fiteny maro kay ka singa manavaka ireo Tiorkmeniana nahita fianarana. Toy ny hoe lamaody iainana anaty taonjato iray hafa tany aloha, fony ireo olona mahay fiteny maro samihafa nalefa nianatra tany amin'ireo oniversite tsara indrindra tao amin'ny faritra no nitantana ny diplaomasia, ka maro ny Tiorkmeniana mahafehy fiteny maromaro, ary tsy voatery ho ilay toa heverina ho mora indrindra.
Mety tsy ampoizina ilay tranga aminà firenena somary mikatona toa an'i Tiorkmenistana, izay ilàna viza hatrany ny fitsidihan'ireo vahiny azy. Inona no afaka ambaran'io fahafehezana fiteny maro momba ny fahitan”ireo manampahaizana ao Tiorkministana ny toerana misy ilay firenana eto amin'izao tontolo izao izao ? Ary inona no azon'izy ireo lazaina amin'izao tontolo izao amin'ireo traikefa vaovaon-dry zareo amin'ny fahaizana fiteny maro ireo?
Ny nipoiran'ny fahafehezana fiteny maro tao Tiorkmenistàna
Rehefa nanontaniana, tsy mba nanafina mihitsy ry zareo Tiorkmeniana amin'ny fomba sy ny antony nahatery azy ireo hianatra fiteny maro hafa. Voalaza fa nanomboka ny taona 1990 izany rehetra izany tamin'ny, tao anaty fotoanan'ny fisalasalana, nisy ireo Tiorkmeniana sasantsasany nahita fianarana no nanomboka nijery lavitra hatrany ampitan'i Moskoa sy tany amin'ireo firenena tao anatin'ny tontolo sovietika fahiny mba hanohy fianarana teny amin'ny oniversite..
Nisy ireo nankany Kairo : ireo Oniversite ao Ejipta mantsy mampiditra an'izay olona rehetra manao fangatahana no sady ambany dia ambany ny saram-pianarana ary indraindray aza tsy misy. Ny famenoana ny taratasy fangatahana amin'ny teny Arabo no hany sakana. Saingy mahita olona afaka hampianatra azy foana ireo Tiorkmeniana manan-katao, ary manomboka mampiasa ilay teny izy ireo aorian'ny fahatongavany any.
(Raha ny marina, io no fotokevitra ao ambadiky ny programa fifanakalozana eo amin'ny samy oniversite rehetra. Ny mahasamihafa dia ny momba ireo Tiorkmeniana, nipoitra tamin'ny laharam-pahamehana tsirairay ny traikefa fandrantoana fianarana, fa tsy rafitra narindra)
Tsy ny Tiorkmeniana rehetra no nahita hoe mifanaraka na mety ny ao Ejipta. Toeram-pampianarana lehibe iray hafa koa i Teheran, izay toerana andehanan'ireo manampahaizana maro handrantoana fianarana ary nahaizany fiteny Farsiana nisosa tsara rehefa niverina avy any.
Firenena be mpitsidika i Tiorkia, ary toerana iray hafa mbola be mpandeha hatramin'izao.Tsy mila viza ahafahany miditra ao ry zareo Tiorkmeniana, sady mifanakaiky rahateo ireo fiteny roa ireo, no samy mora takarina amin'ny lafiny betsaka. Vokatr'izany,tena manana fifandraisana akaiky ireo firenena roa ireo — akaiky kokoa noho ny fifandraisan'ny Tiorkmeniana amin'ireo Sovietika mpifanolo-bodirindrina taloha . Raha ampitahaina, mariho fa na dia misy sidina maro mivantana isanandro aza eo amin'i Istanbul sy Ashgabat renivohitra Tiorkmeniana, tsy misy na dia sidina mivantana iray aza eo amin'i Ashgabat sy Dushanbe izay renivohitra Tajik akaiky indrindra.
Manana sata manokana ao Torkemenistana ihany koa ny teny Tiorka , toerana iray iheverana ny fahalalana ny “fiteny Ottoman” ho mandeha ho azy eo amin'ireo kilasy nahita fianarana. Mandefa fandaharana mankany Tiorkmenistana ny fahitalavitra Tiorka. Samy mandray anjara mavitrika ao amin'ilay firenena na ny governemanta Tiorka, na ny sehatra tsy miankina amin'ny alàlan'ny TIKA (Turkish Development State Agency) ary ireo orinasa mpanorina trano. Orinasa Tiorka no nanangana ilay toeram-pivarotana lehibe indrindra voalohany ao Asghabat, ary manana rihana iray manontolo natokana hivarotana ny vokatra tiorka, ary koa olona miteny Tiorka hanampy manokana ireo Tiorkiana mpila ravinahitra ao Ashgabat.
Mbola tsy nanontaniako velively an'ireo Tiorkmeniana ny fomba nahaizany ny Rosiana. Toy kidaladala ny fametrahana izany fanontaniana izany ao anaty firenena iray tao anatin'ny Sovietika fahiny, na efa ela aza no nesorina lavitra tamin'ny sehatra maro tamin'ny fiainany ny teny Rosiàna.. Na izany aza, mbola mamoaka lahatsoratra amin'ny fiteny rosiana ihany ny gazety lehibe an-tsoratra mivoaka isanandro ao amin'ny firenena, Neytralny Turkmenistan. Fanampin'izany— izay fitsipika iray ankapobeny— mila manafatra zavatra maro ny firenena manana loharanon-karena voafetra, ao anatin'izany ny fanabeazana. Mbola maro ireo Tiorkmeniana manohy fianarana any amin'ireo sampam-pianarana mampiasa ny fiteny Rosiana ho teny fampianarana, na any Rosia , na any Okraina na any amin'ireo renivohitra Sovietika taloha. Ohatra, tsy misy sekoly ambony fampianarana manamory fiaramanidina any Tiorkmenistana, fa mbola mila mpanamory fiaramanidina ihany ny firenena, izay matetika nofanina tany Okraina.
Tahaka ny an'ny teny Tiorka, hay amin'ny alalan'ny fialamboly isan-karazany koa ny fiteny Rosiana. Ny isan'ireo sarimihetsika piraty novokarina tao Rosia dia mety ho ampy hanamarinana ny fianarana ny fiteny Rosiàna. Misy koa ny fahitalavitra Satelita ao Tiorkmenistana ary ny fiteny tena mora azo indrindra, miaraka amin'ny fiteny Tiorka, dia mbola ny Rosiana ihany.
Na tsy ampiasaina amin'ny fiteny ofisialy intsony aza ny fiteny Rosiana ary tsy ampiasaina amin'ny famantarana ofisialy na ny serasera, ary raha toa ka nosoloin'ny latinina ny abidia Cyrillic (misy voanteny manokana hiatrehana ny feo Tiorkmeniana ), dia mbola tsy nisy ny tetezamita feno ho amin'ny Tiorkmenina. Ny famantarana tsotra toy ny “loko mando”, na ny hoe “tsy azo aleha” amin'ny zaridaina na akaikin'ny toerana misy fanorenana no matetika voasoratra amin'ny teny Tiorkmeniana , saingy matetika miaraka aminy ny fandikana Rosiana tsy ofisialy. Tsotra ny fanazavana lojika momba izany satria mety tsy hahatsikaritra izany akory ireo Tiorkmeniana sasany noho ilay abidia vaovao. Farafaharatsiny mba hahatakatra ny dikanteny Rosiana ireo izay manana fahasarotana amin'ny famakiana ny Tiorkmeniana nomena endri-tsoratra Latina .
Saingy nanosika ireo Tiorkmeniana vato nasondrotry ny tany handeha amin'ny fantsona hafa ary hanorina fifandraisana akaiky amin'ny firenena tsy sovietika izay tsy dia manana fifandraisana ara- politika amin'i Tiorkmenistàna loatra ny fotoana sy ireo fanamby.
Na mivangongo aza raha ny fomba fijery ofisialy, tena misy dindo mahery vaika avy amin'ireo fifandraisana tsotra sy ny fifandraisana manokana ny politikan-dry zareo Tiorkmeniana. Raha ny mpandikateny ofisialin'ny filoham-pirenena aza, ohatra, nandany taona maromaro tany Iràna, Tiorkia na Ejypta, dia afaka nandika ny foto-kevitra ara-kolotsaina ka nanolotra fahatakarana amin'ny endriny samihafa ny toetsainn’ ireo diplaomaty vahiny izany olona izany. Afaka mampatsiahy ny filoham-pirenena ihany koa izy ireo , raha tsy mbola fantany ny momba ny anjara toeran'ny firenena eo amin'ny fiainan'ny Tiorkmenistana sy ireo manampahaizana ao. Mety hahatsara ny fifandraisana izany, ary, mety hitarika ho amin'ny fifandraisana ara-toekarena na politika tsaratsara kokoa. Ireo manampahaizana Tiorkmeniana, indrindra ireo izay nofanina tany ivelany, araka izany, dia manana ny fahafahana misafidy (na dia voafetra ihany aza) ary afaka manao tsindry amin'ny fandrafetana ny politikam-pirenena.
Tsy fantatsika hoe hatraiza marina ny halalin'izany, fa ny famakafakana arahan-tsikera momba ny fifandraisana iraisam-pirenena avy amin'ny Social Theory of International Politics  an'i Wendt no niaiky betsaka ny fisian'ny dindon'ireo fifandraisana manokana, ny fomba fijery ary ny singa hafa amin'ny resaka fanapahankevitra politika. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo firenena hafa ankoatr'i Rosia (sy ny Tandrefana) ny Tiorkmenina dia maka ny aingam-panahiny momba ireo modelim-panjifàna, teknolojia, hevitra politika ary fandraharahàna avy amin'ny loharano isan-karazany, avy eo manafatra sy miverina manamboatra azy ireny ary manao ireny ho isan'ny ideolojia nasionaly. Hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantenany, nahita, niverina nandinika indray, na nanamboatra angano sy fomba amam-panao maro, aingampanahy nalaina taminà firenena maro hafa i Torkmenistana.
Misy tokoa angano marobe, tantara foronina ary lovan-tsofina izay mbola velona avy amin'ny vanim-potoana sovietika. Kanefa ny fahasarotan'ny fombafomba, ny hira turbo-pop ao amin'ny firenena sy ireo fomba nentim-paharazana dia isan'ny nalaina tàhaka amin'ny ampahany ihany koa avy tany ivelany .
Ny mazava aloha izany izao dia hoe tsy voatery ho i Rosia no niavian'ny aingam-panahin'ireo ao Tiorkmenistana . Maro amin'ireo firenena hafa, izay angamba notsinontsinoavina, no nandray anjara ihany koa, tsy tamin'ny fanofanana fotsiny ireo Tiorkmeniana manampahaizana, fa mety koa —tamin'ny fomba ankolaka—tamin'ny fanoritsoritana ny tantaran'ny firenena, fihevitra ara-politika, ary ny toerana misy ilay firenena ao anatin'ny sehatra politika iraisam-pirenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/10/144599/